Warar | Somalia News
La-taliyihii amniga ee madaxweyne Deni oo ku geeriyooday Turkiga
Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email Print Viber Ankara (Caasimada Online) – Allaha u naxariistee waxaa Turkiga ku geeriyooday Janaraal Khaliif Ciise Mudan oo maalman arrimo caafimaad u joogay dalkaasi. Marxuumka oo haatan ahaa la-taliyaha amniga madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullahi Deni ayaa waxaa geeridiisa xaqiijiyey qaar ka mid ah ehelladiisa. Khaliif Ciise Mudan ayaa xilal kala duwan ka soo qabtay dalka, isaga oo sanadkii 2019-kii ka mid ahaa musharraxiintii u tartamay xilka madaxweynaha ee Puntland. Sidoo kale wuxuu sanadkii 2011-kii soo noqday wasiirka amniga maamulka Puntland, waxaana horay uu ahaa Duuliye, sidoo kalena wuxuu soo noqday taliyihii u dambeeyay ee ciidanka cirka dowladdii uu hoggaaminayey Alle ha u naxariistee Maxamed Siyaad Barre. Halkan hoose ka aqriso taariikh nololeedka maruumka Wuxuu ku dhashay magaalada Boosaaso sanadkii 1954-kii,wuxuuna ku qaatay waxbarashadiisii hoose, dhexe isla magaaladda Boosaso sidoo kale wuxuu dugsiga sare ka dhigtay Jamaal Cabdinaasir magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. 1974-kii wuxuu dhammeystey jaamacad ku taala dalka Ruushka, wuxuuna noqday Duuliye sare (Pilot) ka tirsan ciidamadii cirka Soomaaliya, ka dibna wuxuu noqday taliyihii u dambeeyay ee ciidamada cirka dowladdii uu hogaamin jiray Siyaad Barre. Sanadkii 1986-kii wuxuu ka qaatay jaamacad ku taala Mareykanka shahaadada Master-ka, siiba cilmiga Master of Business MBA Leadership, Human Resource & Management. Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email Print Viber
Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email Print Viber Xudur (Caasimada Online) – Taliska ciidamada Booliiska Soomaaliyeed ayaa ka warbixiyey gaadiid ay dagaalyahano ka tirsan kooxda Al-Shabaab xalay ku gubeen duleedka degmada Xudur oo ah xarunta gobolka Bakool ee koonfurta Somalia. Gaadiidkan oo ahaa nooca qaada xamuulka, islamarkaana u rarnaa ganacsato Soomaaliyeed ayaa ka amba-baxay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, wuxuuna ku sii jeeday dhanka magaalada Xudur, sida lagu sheegay warka Booliiska. Qoraalkan ayaa sidoo kale lagu shaaciyey in gaadiidkaasi oo gaarayey illaa todobo dab la qabad-siiyey xilli ay marayeen deegaanka Emed Kooeey ee gobolka Bakool. “Abaare 08:00 fiidnimo Alshanaab ayaa ku gubeen 7 gaadiid ah oo nuuca xamuulka qaada ah bananka hore ee Tuulada EMED KOOREEY ee Gobolka Bakool, gadiidkaan oo ay lahayeen isla markaana u rarnaa dadka shacabka ah, ayaa ka soo baxay Beledweyne kuna sii jeeday Xudur” ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay taliska ciidanka Booliiska. Al-Shabaab ayaa horey u go’doomiyey degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobollada Baay iyo Bakool ee koonfurta Soomaaliya. Inta badan dagaalyahano Al-Shabaab ayaa weeraro kala duwan ka fuliya deegaanada maamulka Koonfur Galbeed oo ay weli ka heystaan degmooyin iyo deegaano dhowr ah. Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email Print Viber
Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email Print Viber Muqdisho (Caasimada Online) – Shirka musharraiinta mucaaradka uga socda gudaha magaalada Muqdisho oo galay maalintiisii afaraad ayaa lagu wadaa in maanta la soo gaba-gabeeyo, kaas oo laga soo saari doonaan war-murtiyeed ka kooban dhowr qodob. Shirkan oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxaa intiisa badan diirada lagu saaray xaaladda dalka, gaar ahaan doorashooyinka 2020/2021-ka. Musharraxiinta ayaa si gaar ah xooga u saaray muranka ka taagan dhismaha guddiyada doorashooyinka dalka ee ay horey ugu dhowaaqday xukuumadda Soomaaliya. Sidoo kale waxaa shirka ku biiran shalay iyo xalay guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. War-murtiyeedka shirka oo galabta soo bixi doono ayaa ah mid isha aad loogu wada-hayo, islamarkaana laga war dhowrayo dhawaqa ka soo yeeri doono musharraxiinta. Intii uu socday shirweynahay waxaa ka qeyb-galay ururada bulshada rayidka iyo culuma u diinka, si ay taladood ugu biiriyaan xaaladda uu haatan marayo dalka. Soomaaliya ayaa isku diyaarineyso doorasho guud oo isugu jirta tan baarlamaanka iyo madaxweynaha, waxaana socda dhaq-dhaqaaq siyaasadeed oo ku aadan doorashadaasi. Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email Print Viber
Washington (Caasimada Online) – Madaxweyne Donald Trump ayaa oggolaaday in uu bilaabo marxaladdii xil-wareejinta ee Joe Biden kula wareegi lahaa xafiiska. Trump ayaa sheegay in hay’adda federaalka ee dusha kala socota wareejintu ay tahay in ay “sameyso waxa loo baahan yahay in la sameeyo”, inkasta oo uu wacad ku maray in uu sii wadi doono loollankiisa dhanka sharciga ah ee doorashada. Maamulka adeegyada guud (GSA) ayaa sheegay inay qirayaan Mr Biden inuu yahay “guulaystaha hadda”. Arrintan ayaa imanaysa kaddib markii Michigan la xaqiijiyey ku guulaysigeeda dhabta ah , taas oo dharbaaxo weyn oo ku ahayd Mr Trump. Kooxda Biden ayaa si weyn u soo dhaweysay hadalka ka soo yeeray Trump uu ku oggolaaday marxaladda xil wareejinta iney billaabanto. Bayaan ka soo baxay Trump ayaa waxaa lagu sheegay tallaabbadan iney tahay mid loo baahnaa si loo billaabo wax ka qabashada dhibaatooyinka bulshada haysata oo ay ka mid tahay dhaqaalaha dalka in lagu soo celiyo waddadii saxda ahayd. Go’aanka Trump uu gaadhay ayaa la sheegay hay’adaha dowladda dhexe ee Mareykanka iney u sahleyso iney si rasmi ah u billaabaan marxaladda xil wareejinta labada madaxweyne, kan la doortay iyo kan laga guuleystay. Mr Trump wuxuu bartiisa Twitter-ka uu ku soo qoray hay’adaha federaalku iney marxaladda xil wareejinta ay si rasmi ah u billaabaan. Wuxuu sida oo kale Kooxda Biden uu ku wargeliyey iney iyaguna dhankooda howsha kaga aaddan xil wareejinta ay guda galaan. Emily Murphy oo howlahan u xilsaaran waxay sheegtay madaxweynaha la doortay inay u heleyso 6.3 malyan oo doolar oo howsha lagu fuliyo. Ms Marphy waxaa dhalleeceyn xooggan uga timid dhinacyada siyaasadeed iyaga oo ku eedeeyey iney ku guul darreysatay iney billawdo marxaladda ay labada madaxweyne xilka kula kala wareegi lahaayeen. Ms Murphy waxay iyaduna sheegtay wakiillada dimuqraadiga ee Aqalka golaha wakiillada iney qorsheeyeen Isniinta iney xildhibaannada uga warbixiso dib u dhaca yimid. Madaxweyne Trump wuxuu cadaadis xooggan uu uga imaneyey xubnaha sarsare ee xisbiga dimuqraadiga oo ay ku jiraan shaqsiyaada ay Trump aad isugu dhow yihiin. Isha: BBC.
Madaxweyne TRUMP oo qaatay go’aan lama filaan ah
Rooble oo sameeyey ballan-qaad la xiriira doorashada xilli uu jiro muran xooggan
Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, oo shalay khudbad dhinacyo badan taabaneysay u jeediyay Golaha Ammaanka, ayaa sameeyey ballan-qaad la xiriira doorashada xilli ay jiraan walaacyo badan. Musharaxiinta mucaaradka ayaa ku gacan seeray sida uu ku socdo hanaanka doorashada iyo guddiyada la magacaabay, waxayna shir ka fureen Muqdisho, ayada oo la filayo inay qaadacaan. Si kastaba, Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble sheegay inay ka go’an tahay qabashada doorasho xor ah, isla markaana ku dhacda waqtigeedii. Wuxuu intaas ku daray inay Soomaaliya ka go’antahay qabashada doorashada baarlamaanka dabayaqaada sannadkan, iyo doorashada hoggaanka horraanta sannadka soo socda. Qoondada haweenka ee 30% ayuu Ra’iisul Wasaaruhu sheegay in la xaqiijin doono doorashada dhacaysa, waxa uuna yiri “Way naga go’an tahay in aan ilaalinno qoondada haweenka ee 30%, xeer hoosaadkii baarlamaanku dhawaan ansixiyay ayaa si cad u qeexaya in ujeeddada loo socdaa tahay in matalaadda haweenku gaarto 50%.” Dhanka amniga ayuu Ra’iisul Wasaaruhu sheegay ciidammada Qalabka sida ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ay guulo wax ku ool ah ka soo hoynayaan dagaalka ay kula jiraan argagixisada. Ra’iisul Wasaarre Rooble ayaa sidoo kale khudbaddiisa kaga hadlay horumarrada ay dowladda Soomaaliya ka sameysay dhinaca dhaqaalaha iyo dakhli ururinta, taas oo uu sheegay horumar wanaagsani ka jiro. Mar uu ka hadlayay dhinaca xorriyatul qowlka iyo saxaafadda waxa uu Ra’iisul Wasaaruhu sheegay in dowladdu garawsan tahay kaalinta muhiimka ah ee saxaafaddu ku leedahay geeddi socodka qaran dhiska, isagoo intaa ku daray in la ansixiyay xeerka saxaafadda oo warfidiyeenka u dammaanad qaadaya in ay xorriyad ku shaqeeyaan. Waxa uu Ra’iisul Wasaaruhu intaa ku daray in dowladdu dib u habeyn ku sameysay habka xiriirka warbaahinta ee xafiisyada muhiimka ah, si ay saxafiyiintu u helaan xogo ku saabsan qorsheyaasha iyo howlaha dowladdu hayso. Ra’iisul Wasaaraha ayaa sidoo kale Golaha Ammaanka uga warbixiyay xaaladda xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya iyo dadaallada dowladdu kula tacaaleyso.
La-taliyihii amniga ee Deni oo ku geeriyooday Turkiga
Muqdisho (Caasimada Online) – Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa maanta shir ka yeeshay arrimaha Soomaaliya, shirkaasi oo ahaa mid Golaha Ammaanka xog lagaga siinayey hawlgallada Qaramada Midoobay ee UNSOM iyo hawlgalka AMISOM ee Midowga Afrika. Shirka, oo u dhacay qaab Online ah, waxaa ka hadlay labada ergay ee Qaramada Midoobay iyo Midowga Afrika James Swan iyo Francisco Madeira oo labaduba ka hadlay doorka ay kaga jiraan taageerista geeddi-socodka xasilinta iyo dawladnimada Soomaaliya. James Swan ayaa sheegay in wada-hadallada siyaasadeed ay muhiim u yihiin wax ka qabashada arrimaha taagan ee Soomaaliya, wuxuuna ku booriyey jilayaasha siyaasadda in wada-hadallo dhexdooda ah ku dhameeyaan wax kasta. Waxaa iyaguna ka hadlay wakiillada xubnaha Golaha Ammaanka oo ay ka mid yihiin wakiillada Maraykanka, Britain iyo Faransiiska. Ugu dambayn waxaa shirka ka hadlay oo soo gabagabeeyey Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Ra’iisul Wasaaraha ayaa ka hadlay heshiiskii ay gaareen madaxda dalwadda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee ku saabsan doorashada Soomaaliya. Waxa uu sheegay inay Soomaaliya ka go’antahay qabashada doorashada baarlamaanka dabayaqaada sannadkan, iyo doorashada hoggaanka horraanta sannadka soo socda. Waxa uu Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble sheegay inay ka go’an tahay qabashada doorasho xor ah, isla markaana ku dhacda waqtigeedii. Waxaa uu sidoo kale sheegay in la ilaalinayo qoondada haweenka ee baarlamaanka oo ah 30%, iyo ka qaybgalka dumarka ee heerarka kala duwan ee dawladda. Waxa uu sheegay inuu xafiiskiisu guddi u saaray soo dejiya tubta loo marayo doorasho qof iyo cod ah oo waddanka ka dhacda 2024/2025, waxaana uu sheegay inay durba soo gudbiyeen qoraal qabyo ah kaasi oo la hordhigi doono Golaha Wasiirrada. Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa sheegay inay dawladdu baarlamaanka u gudbin doonto xubnaha guddiyada la dagaalanka musuq-maasuqa iyo guddiga xuquuqda aadanaha. Xigasho: VOA